ပရိသတျမြားသဘောကစြမေညျ့ Jennifer Lopez ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို။ – SoShwe
Home/Entertainment/ပရိသတျမြားသဘောကစြမေညျ့ Jennifer Lopez ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို။
ပရိသတျမြားသဘောကစြမေညျ့ Jennifer Lopez ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို။
So Shwe March 11, 2020	Entertainment Leaveacomment
Flipped the switch ဆိုသညျ့ Challenge က လကျရှိ Tik Tok ပျေါ၌ ရပေနျးအစားဆုံးဖွဈနသေညျ့ Challenge တဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ Challenge ၌ လူနှဈဦးပါဝငျပွီး Drake ရဲ့ Nonstop သီခငျြးကို နောကျခံတီးလုံးအဖွဈ အသုံးပွုကာ ကပွရသညျ့ Challenge တဈခုဖွဈပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ အထကျလှတျတျောအမတျတဈဦးဖွဈသူ Elizabeth Warren နဲ့ အမရေိကနျမငျးသမီးတဈဦးဖွဈသူ Kate McKinnon တို့က အဆိုပါ Challenge ကို အစပွုခဲ့ကွပွီး လကျရှိအခြိနျ၌ ဟောလိဝုဒျရဲ့ နာမညျကြျော Jennifer Lopez ကလညျး သူမရဲ့ခဈြသူ Alex Rodriguez နဲ့အတူ အဆိုပါ Challenge ကို ပွုလုပျပွသှားခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါ Tik Tok ဗီဒီယိုရဲ့အစပိုငျး၌ မှနျရှတှေ့ငျရပျနသေော Alex ကဖုနျးကိုကိုငျရငျး ဗီဒီယိုရိုကျကူးပေးနပွေီး Jennifer က သူမရဲ့ဆှဲဆောငျမှုအပွညျ့ရှိသညျ့ ခန်ဓာကိုယျဖွငျ့ Alex ရဲ့နောကျမှကပွနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နောကျပိုငျးဗီဒီယို၌မူ Jennifer က Alex ရဲ့ပုံစံအတိုငျးလိုကျလံဝတျဆငျပွီး မှနျရှေ့၌ ဖုနျးဖွငျ့ဗီဒီယိုရိုကျနကော Alex က Jennifer လိုဝတျဆငျပွီး ပွနျလညျကပွခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ Tik Tok ဗီဒီယိုက ပရိသတျတှအေကွား ရပေနျးစားကြျောကွားနပွေီး Alex ရဲ့ သရုပျဆောငျပုံကိုလညျး ပရိသတျတှကေ အလှနျအမငျး သဘောကလြကျြရှိကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
Jennifer နဲ့ Alex တို့ နှဈဦးသညျ (၃) နှဈကွာမတ်ေတာမြှလာခဲ့ကွသူမြားဖွဈပွီး ပွီးခဲ့သညျ့ (၂၀၁၉) ခုနှဈ၊ မတျလအတှငျးက စစေ့ပျခဲ့ကွပမေယျ့ လကျရှိအခြိနျအထိ မင်ျဂလာပှဲကို ကငျြးပရခွငျးမရှိသေးကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
ပရိသတ်များသဘောကျစေမည့် Jennifer Lopez ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို။
Flipped the switch ဆိုသည့် Challenge က လက်ရှိ Tik Tok ပေါ်၌ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေသည့် Challenge တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Challenge ၌ လူနှစ်ဦးပါဝင်ပြီး Drake ရဲ့ Nonstop သီချင်းကို နောက်ခံတီးလုံးအဖြစ် အသုံးပြုကာ ကပြရသည့် Challenge တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အထက်လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးဖြစ်သူ Elizabeth Warren နဲ့ အမေရိကန်မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်သူ Kate McKinnon တို့က အဆိုပါ Challenge ကို အစပြုခဲ့ကြပြီး လက်ရှိအချိန်၌ ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ နာမည်ကျော် Jennifer Lopez ကလည်း သူမရဲ့ချစ်သူ Alex Rodriguez နဲ့အတူ အဆိုပါ Challenge ကို ပြုလုပ်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ Tik Tok ဗီဒီယိုရဲ့အစပိုင်း၌ မှန်ရှေ့တွင်ရပ်နေသော Alex ကဖုန်းကိုကိုင်ရင်း ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပေးနေပြီး Jennifer က သူမရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိသည့် ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် Alex ရဲ့နောက်မှကပြနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းဗီဒီယို၌မူ Jennifer က Alex ရဲ့ပုံစံအတိုင်းလိုက်လံဝတ်ဆင်ပြီး မှန်ရှေ့၌ ဖုန်းဖြင့်ဗီဒီယိုရိုက်နေကာ Alex က Jennifer လိုဝတ်ဆင်ပြီး ပြန်လည်ကပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Tik Tok ဗီဒီယိုက ပရိသတ်တွေအကြား ရေပန်းစားကျော်ကြားနေပြီး Alex ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အလွန်အမင်း သဘောကျလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Jennifer နဲ့ Alex တို့ နှစ်ဦးသည် (၃) နှစ်ကြာမေတ္တာမျှလာခဲ့ကြသူများဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့် (၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်းက စေ့စပ်ခဲ့ကြပေမယ့် လက်ရှိအချိန်အထိ မင်္ဂလာပွဲကို ကျင်းပရခြင်းမရှိသေးကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
Previous ???????????????????? Shah Rukh Khan ??????????? ???????????????
Next ???? ???????????? ?????????????????????? HSBC ?????? ??????????????????